automatic servo model bottle filling machine factory and suppliers | Leadworld
Mkpọ Food Production Line
Mkpọ mkpụrụ mmepụta akara
Mkpọ Meat Production Line
Mkpọ akwukwo nri mmepụta akara
isi igwe nke nri mkpọ mmepụta akara
N'ihu ndochi mmepụta Line
erikpu & ejuputa mmepụta akara
Onunu Igbo mmepụta Line
Automatic Pịkụl ite ndochi Production Line
Daily ndochi Production Line
Automatic ngwugwu Production Line
Automatic ngwugwu Product Line
Ileba Packer System
Bottle Ịsa Machine
nwoke ịga ụlọ ọgwụ Machine
Uwe labeling Machine
Igbo mmepụta Line
Ugboro abụọ na-n'akụkụ labeling igwe
Ala ebu System
Mkpọ oroma mmepụta akara
Mkpọ odo peach mmepụta akara
mkpọ painiapulu mmepụta akara
mkpọ ọka mmepụta akara
mkpọ ero mmepụta akara
mkpọ kukumba mmepụta akara
mkpọ agwa mmepụta akara
Mkpọ azu akara
Mkpọ luncheon mmepụta anụ akara
Mkpọ chicken mmepụta akara
akpaka servo nlereanya karama ndochi igwe
Send email anyị Download as video
LW-FM akpaka servo ịnya ụgbọ ndochi igwe na-akakwa mma dị ka cylinder ndochi usoro. Ịmụta servo usoro, elu ndochi ezi ezi. More mụ, mfe iji rụọ ọrụ, ala oriri ike, ala oké ụzụ.
Nhicha ngwa ngwa, na-ike ịgbanwe ngwa ngwa, mgbanwe ngwa ngwa. Olu nke cylinder ahụ gbanwere stepless-ọsọ. Ọ ga-eji dị iche iche ndochi kụrụ na iche iche iche iche nke mmiri mmiri. Ejuputa otu oge. Ị nwere ike ịgbanwe onye ọ bụla olu nke cylinder ahụ iche iche.
Ịmụta PLC akara, i nwere ike ịgbanwe na-ejuputa nso, kpatụ igwe, ma ọ bụ mgbanwe dị iche iche site na aka na ihuenyo. Input karama, ka ọnọdụ, ndochi, karama outputting automaticlly. Ọ bụrụ na karama-adịghị rutere ẹkedọhọde ntụpọ, ma ọ bụ kalama igbochi, ma ọ bụ mmiri mmiri outputting anwụrụ adịghị setted ọma, igwe ga-akwụsị ọrụ ruo mgbe ajụjụ a imeri.
产量 ikike 灌装 范围 Igbo olu 灌装 精度 Igbo ziri ezi
480-720 瓶 / 小时
960-1920 瓶 / 小时
Best PLC Na ụwa
ebe ọ bụ na 1847
Best ika Na ụwa
Top atọ na ụwa
ebe ọ bụ na 1920
Thunder bran na China
ebe ọ bụ na 1988
eduga ozo na ụwa
ebe ọ bụ na 1948
ebe ọ bụ na 1968
ebe ọ bụ na 1964
Japan ọ bụ waterproof
ebe ọ bụ na 1974
ihe Ụba bụ SUS304, mmiri mmiri jikọọ akụkụ bụ SUS316L
pipe Dị elu àgwà mkpakọ eguzogide ígwè anwụrụ
Igbo ụkpụrụ ntụziaka:
Nke a igwe ịmụta servo ịnya ụgbọ ala usoro. Mgbe servo moto ụgbọala na obi ụtọ ịghasa ịkwaga download.
The pistin mkpanaka bugharịa pistin ala, ndị pistin na tube ịkpali ala. ihe site n'ọnu-miri ego valvụ na-aracha ya aracha n'ime ihe tube; N'aka nke ọzọ, ndị pistin akpali elu, na pistin na ihe onwunwe anwụrụ a na-akpali elu, ihe site na mbupụ ego valvụ e enwe n'ime mmiri Head, ka imeta ndochi usoro. The ọsọ ike gbanwee dị ka viscosity nke ihe onwunwe.
Nke atọ, arụmọrụ na àgwà:
1) akụkụ nile nke ihe na-eji igwe anaghị agba nchara nhazi, na afọ ojuju na GMP chọrọ;
2) pneumatic mmiri na ọkụ na ngwaahịa ndị ụwa maara nke ọma ika ngwaahịa;
3) na-ejuputa ọnụ na-emegide ya na-atanye ọrụ, ga-agbanwe na-ebuli ihe n'ihi na elu ụfụfụ ngwaahịa;
4) iji nweta a ngwa ngwa ukpụhọde nke mkpokọta ndochi olu, na ojiji nke counter ngosi; onye ọ bụla isi nke ndochi olu nwere ike ịbụ n'otu n'otu ezi-na-n'iji ya gee ntị, adaba na ngwa ngwa.
5) PLC mmemme akara, aka-ụdị mmadụ igwe interface, oke mwube adaba. Nsogbu onwe onye na-achọpụta ọrịa ọrụ, kpatara ngosi na a ilekiri;
6) Igbo na interface akụkụ na mwekota njikọ, nhicha disassembly mfe.
7) Iji gbochie mgbasa nke pistin, niile pistin na PTFE ihe onwunwe, karịsịa maka okpomọkụ nke ngwaahịa.
Ọ na-mere nke igwe eku, ngwaahịa tank, servo moto, bọl ịghasa, ọjà tube, cylinder, na-ejuputa isi, akara akpa, na ime igbe, mbuli usoro, karama-ejigide na ngwaọrụ na karama clip ngwaọrụ.
Q1: Gịnị bụ gị na ụlọ ọrụ bụ isi na ngwaahịa?
Igbo Production akara, Palletizer, Conveyors, Sterilizer, akara igwe, Capping Machines, mbukota Machines, ịkpọ Machines na na.
Q2: Gịnị bụ nnyefe ụbọchị gị ngwaahịa?
Nnyefe ụbọchị bụ 30-40-arụ ọrụ ụbọchị na-emekarị ọtụtụ ndị ígwè ọrụ.
Q3: Gịnị bụ ugwo okwu?
Ịkwụnye 30% n'ọdịnihu na 70% n'ihu Mbupu igwe.
Q4: Ị emeputa ma ọ bụ trading ụlọ ọrụ?
Anyị bụ ndị rụpụta kwupụtara site SGS / BV / OA ụlọ ọrụ na anyị nwere onwe anyị imewe otu.
Q5: Olee ebe ị na-emi odude? Ọ adaba leta gị?
Anyị na-dị na Shanghai. Okporo ụzọ dị nnọọ adaba.
Q6: Olee otú ị pụrụ ekwe nkwa quality?
1.We dechara-arụ ọrụ usoro na usoro na anyị na-agbaso ha
2.Our dị iche iche na-arụ ọrụ bụ maka dị iche iche na-arụ ọrụ usoro, ọrụ ha
na-egosi na, na ga na-arụ ọrụ na usoro a, ya mere, dị nnọọ nwetara.
3.The eletriki pneumatic mmiri bụ site n'ụwa a ma ama na ụlọ ọrụ,
dị ka Germany Siemens, Japanese Panasonic wdg
4.We ga-eme ike ule na-agba ọsọ mgbe igwe na-okokụre.
5.Our igwe na-gbaara site SGS, ISO, OA.
Q7: nwere ike ị na-chepụta igwe dị ka anyị chọrọ?
Ee. Anyị bụghị naanị nwere ike hazie igwe dị ka gị oru
ịbịaru, ma nwere ike ime ka ọhụrụ igwe dị ka gị chọrọ.
Q8: nwere ike ị na-enye esenidụt oru nkwado?
Ee. Anyị nwere ike izipu engineer gị ụlọ ọrụ ka igwe na-azụ gị
ọrụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Q9: Gịnị ahịa anyị na-atụkwasị obi na-ahọrọ anyị?
2.we nwere ebuka
3.delivery ngwa ngwa
7.strict àgwà akara
8.over 10 afọ ahụmahụ
10.varity nke ibu
11.excellent mgbe-sales ọrụ
12.advanced ígwè na akụrụngwa
Rụtụ ngwaahịa a:
na-ejuputa na oru productionn akara
Previous: akpaka jerrycans erikpu na-ejuputa igwe
Osote: akpaka Pịkụl iko ite ndochi igwe
akpaka jerrycans erikpu na-ejuputa igwe
akpaka Pịkụl iko ite ndochi igwe
flowmeter akpaka karama ihe ọṅụṅụ ndochi igwe
Okwu: NO.5599 Shenzhuan Road Songjiang District, Shanghai
Ekwentị: 86 021- 37693309
© Copyright - 2010-2018: All Rights echekwabara. - Power site Globalso.com